Cabista bunka (Coffee) iyo faa’dooyinkiisa caafimaad (Daraasado cusub) – Kasmo Newspaper
Cabista bunka (Coffee) iyo faa’dooyinkiisa caafimaad (Daraasado cusub)
Updated - July 14, 2017 2:35 pm GMT
London (Kasmo), Dadka badsada cabista bunka (Coffee) ayaan inta badan ku siganin in ay u dhintaan xanuunnada qaarkood, sida ku soo baxday 2 daraasadood oo tirakoob ah oo dhowaan la sameeyay. Xanuunnada waxaa ka mid ah wadne-xanuunka “Cardiovascular”, shalalka “Stroke” iyo beer-xanuunka.
Laakiin daraasaduhu ma qeexayaan wali xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya sababta ama faa’idooyinka cabista qaxwaha, xitaa nooca De-caf.
Daraasadaha middood waxaa samaysay Veronica Wendy Setiawan oo ka tirsan “Keck School of Medicine” ee Jaamacadda “Southern California University”, waxaana baahiyay Wargayska “Annals of Internal Medicine”. Waxaa lagu caddeeyay in cabista 1 koob oo qaxwa ah (nooca dheer ee an express ahayn), maalintii uu hoos u dhigayo 12% halista geerida, tiradaas oo hoos ugu sii dhacaysa 18% qofkii 3 koob caba.
Daraasaddu waxay ku fadhidaa lafagursita hab-dhaqanka dad qaangaar ah oo tiradoodu gaarayso 215, da’dooduna u dhaxayso 45 ilaa 75 sano. Baaritaanka waxaa la isku xiray faa’dooyinka iyo carafta bunka (Antioxidants and Phenolic compounds) oo door muhiim ah ka cayaara ka –hortagga Kansarka.
Daraasad 2aad oo isla Wargayskaasi baahiyay waxay isku xiraysaa cabista bunka iyo yaraanta halista loogu dhiman karo xanuunnada warreegga dhiigga (Circulatory) iyo dheef-shiidka (Digestive).
Sababtaas darteedna, Prof Elio Riboli, Agaasimaha “School of Public Health” ee Jaamacadda “Imperial College of London” ayaa baaritaan ku sameeyay caadada in ka badan nus malyuun reer Yurub ah. Baaritaankaas oo muujiyay in badsashada cabista bunka ay hoos u dhigayso calaamadaha ololka (Inflamation markers), isla markaasna hagaajinayso shaqada beerka (Liver function).
Baarayaal kale oo Jaamacadda “John Hopkins University” waxay ku talinayaan taxaddar, waayoo wali waa wakhti hore in laga hadlo xiriirka cabista bunka iyo cimri dhererka.
Laakiin arrinta cusub ee soo biirtay waa badsashadiisa in ay tahay waxa la hubo, marka laga hadlo cabistiisa 3 ilaa 5 koob maalintii. Sidaa darteed ma ahan 1 tufaax ah maalintii waxa kaa baajin kara in ad dhakhtarka aaddo, laakiin waa 1 koob oo qaxwo ah oo dheeri ah.